Dr Ansumali Joshi's Diabetes, Thyroid & Endocrine Clinic, Kathmandu, Nepal: थाइराइड कम या बढी हुँदा यस्तो हुन्छ ?
थाइराइड कम या बढी हुँदा यस्तो हुन्छ ?
विभिन्न कारणले थाइराइड ग्रन्थिले थाइराइड हर्मोन कम या बढी उत्पादन गर्नुलाई थाइराइड समस्या भनिन्छ । ग्रन्थिले हर्मोन कम उत्पादन गर्दा हुने समस्यालाई हासिमोटोज थाइराइड डिजिज र बढी उत्पादन गर्नुलाई ग्रेप्सडिजिज भनिन्छ । लक्षण थकावट धेरै हुने । अल्छीपना हुने । स्मरणशक्ति कम हुँदै जाने । कपाल झर्ने, मोटाउने । जिउ सुन्निने, दुख्ने । महिलाको महिनावारीमा गडबडी हुने । निःसन्तानको समस्या हुने । कब्जियत हुने । छालाका राैँ परिवर्तन हुने । बढी हुँदा देखिने लक्षण पसिना धेरै आउने । मुटु ढुकढुक हुने । दुब्लाउँदै जाने । महिनावारी गडबडी हुने । गलगाँड देखिने । हर्मोनको कारण थाइराइडमा समस्या भएमा रोग आफैँ निको हुँदैन । जिन्दगीभर नै औषधि खाइरहनुपर्छ । औषधि ट्याब्लेट र विकिरणका रूपमा पनि हुन्छन् । केही केसमा भने गलगाँड देखिएर औषधि खाँदा निको भएको पनि छ । कहिलेकाहीँ आँखामा पनि असर गर्छ । ग्रन्थि बढ्न सक्छ आयोडिन कम या बढी हुँदा, भाइरल इन्फेक्सन हुँदा, अटोइम्युन डिजिज हुँदा वा खानपानमा मिसावटले पनि ग्रन्थिमा गलगाँड पलाउँछ । विभिन्न किसिमका रासायन मिसिएक खाद्य पदार्थ सेवन, वातावरणीय विषादी र वंशाणुगत कारणले पनि यो रोग लाग्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो यस्तो गलगाँडमा क्यान्सर छ–छैन भनेर समय–समयमा जाँच गराउनुपर्छ । ग्रन्थि बढ्दा गलगाँड देखिने । घाँटी दुख्ने । ठूलो हुँदै जाँदा सास फेर्न गाह्रो हुने । खाना खान गाह्रो हुने । उपचार विधि गलगाँड मात्र छ भने अप्रेसन गरेर निकाल्ने । निगरानीमा राख्ने, बढ्दै गयो भने शल्यक्रिया गरी फाल्ने, नत्र त्यत्तिकै छाडिदिने । गलगाँडलाई वर्षमा एकपटक क्यान्सर भयो कि भनेर सुइजाँच गर्नुपर्छ । केही गलगाँड बढ्दै गएर क्यान्सर पनि हुन सक्छ । थाइराइड क्यान्सर थाइराइड क्यान्सर अन्य क्यान्सरजस्तो डरलाग्दो हुँदैन । धेरैजसो यस्तो केसमा उपचार सहज हुन्छ । उपचारपछि यो पूर्ण रूपमा निको हुने क्यान्सर हो । लक्षण थाइराइड क्यान्सरमा पनि गलगाँड पलाउने हुन्छ । स्वर परिवर्तन हुने । गलगाँड ठूलो भएर सास फेर्न गाह्रो हुने । खाना नलीलाई असर गरेर खाना निल्न गार्हा् हुन्छ । जाँच गरेर हेर्दा क्यान्सर देखिन सक्छ । उपचार गर्दा सहजै निको भएपछि पनि नियमित औषधि खानुपर्छ । चिकित्सकको सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ । थाइराइडसम्बन्धी बुझ्नुपर्ने कुरा अटोइम्युन थाइराइड वंशाणुगत थाइराइड हो । बन्दा–काउली खानुँहुदैन भन्ने हल्ला हो । तर, एकजनाले दिनमा एक किलोभन्दा बढी खाएमा मात्र असर पर्छ । आयोडिन कम वा बढी सेवन गर्नुहुँदैन । वंशाणुगत थाइराइड समस्या पुरुषभन्दा महिलामा बढी देखिन्छ । यो समस्या १० जना महिलामा देखिँदा एकजना पुरुषमा देखिएको छ । महिलालाई बढी देखिनुको कारण हर्मोनको परिवर्तन पुरुषभन्दा बढी महिलामा हुनुले हो । - See more at: http://etajakhabar.com/11/20/48598#sthash.TKeH9oiR.dpuf
Posted by Dr Ansumali Joshi at 11:22 AM
इन्सुिलन भ्रम र यथार्थ
गर्भवतीलाई मधुमेह बच्चालाई बढी खतरा
प्रजनन उमेरका महिलाको रोग, जसले अनुहारमा रौं उमार्...
यी हुन् मधुमेह रोग बारेमा सुनिने भ्रम र बास्तविकता...
के हो थाइराइड रोग ? यस्ता छन् भ्रम र यथार्थ